Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Brits: Sikhupheni endlini nihambe nge holiday
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Abantu bavaleleke kakhulu ezindlwini kangangeenyanga ezininzi kwaye olu phando lubonisa ukuba bayagula kukubona iindonga zabo ezine.
Ngaphezu kwesiqingatha sabantu abadala base-UK abathi bangcono ngoku kunangaphambili ubhubhani we-Covid baya kusebenzisa imali eyongezelelweyo ukutshiza ngeholide ngo-2022, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo woku-1 kuNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Umntu omnye kwabahlanu kwabayi-1,000 2021 abaphendula kwiNgxelo yoShishino lwe-WTM ka-XNUMX uthe bangcono kunangaphambili kwe-Covid, xa ukuphuma kwakuphezulu.
Xa bebuzwa: “Ngemali, ngaba ungcono okanye ukwimeko embi kakhulu ukusukela oko kwaqala ubhubhane?”, uninzi lwabathe baphendula (62%) bathe 'kwafanayo'; I-20% yathi ingcono kwaye i-18% inzima kakhulu. Abaphenduli bacelwe ukuba baqwalasele zombini imivuzo kunye nokuphumayo kwimpendulo yabo.
Xa abo bathi ngoku baphila bhetele babuzwa oku: “Uceba ukuchitha imali yakho eyongezelelekileyo entwenini?” iholide yaphuma njengempendulo ephezulu, kunye ne-55% bathi baceba ukuyisebenzisa ukubhukisha indawo yokubalekela. Eli nani liphantse liphindwe kabini kuneyona mpendulo ilandelayo, apho iipesenti ezingama-31 zabo baphila ngcono kune-COVID-XNUMX bathe bazoyichitha kuphuculo lwamakhaya.
Umntu olumkileyo kwabane (28%) uthe “bayakugcina imali ebhankini ngemini yemvula”; I-26% ithe baza kuyichitha kwisikhenkcisi-sikhenkcisi esitsha okanye into efana nale kwicandelo lempahla emhlophe ze i-21% ithenge imoto entsha. Malunga nomntu omnye kwabali-10, (12%) uthe bazakubeka imali ekuthengeni indlu entsha.
Olona lukhuthazayo ngakumbi kushishino lokuhamba, inani elibalulekileyo alikathathwa zigqibo kwaye linokuphenjelelwa ngabakhenkethi kunye neendawo ezibahenda ukuba bachithe imali yabo kwiholide. Kwabo bathi bangcono ukusukela oko yaqala i-COVID, isi-7% "abakayicingi" into abaza kuyenza ngemali.
UMlawuli weMboniso weWTM eLondon uSimon Press uthe: “Lo ngumculo ezindlebeni zeshishini lokuhamba. Umntu onethamsanqa kwabahlanu e-UK ngoku uzifumana ekwimeko engcono ngokwezemali kunangaphambili kwe-Covid, kuba 'bagcinile ngengozi' kunye namatyala aphantsi asekhaya.
“Abantu bebevaleleke ezindlwini kangangeenyanga ezininzi kwaye olu phando lubonisa ukuba bayagula kukubona iindonga zabo ezine.
“Endaweni yokuchitha imali ekuphuculeni ikhaya okanye kumatshini omtsha wokuvasa, bafuna nje ukuphuma baye kutyhutyha ubomi babo ngoku izithintelo ziyehla. Yeyiphi indlela engcono yokubaleka kuyo yonke into kunokubhukisha iholide?
“Sele sisazi ukuba kukho imfuneko yokuya phesheya kweelwandle kwaye iindawo zokuya kuzo ziya kukhuphisana ukuze kutsalwe inkcitho yabo banemali yokutshisa nabanokuthi barhwebe kwaye bachitheke kwiholide yabo elandelayo. .
Ngaphezu koko, nge-7% eyongezelelekileyo besithi khange bacinge ngento abaza kuyenza ngemali yabo eyongezelelweyo, iinkampani zokuhamba zinokuba nesiqwenga esikhulu ngakumbi sekeyiki emnandi ye-Covid.